KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Albanian Sign Language American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Melanesian Sign Language Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkish Sign Language Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ahene Nhoma a Ɛto So Abien 23:1-37
Yosia pagyaw Onyankopɔn som (1-20)
Wodii Twam (21-23)
Nneɛma foforo a Yosia de totoo yiye (24-27)
Yosia wui (28-30)
Yuda hene Yehoahas ahenni (31-33)
Yuda hene Yehoiakim ahenni (34-37)
23 Enti ɔhene de nkra kɔe, na wɔfrɛɛ Yuda ne Yerusalem mpanyimfo nyinaa bae.+ 2 Afei Yuda mmarima nyinaa, Yerusalemfo nyinaa, asɔfo, ne adiyifo no ne ɔman no nyinaa, efi akumaa so kosi ɔkɛse so, ɔhene ne wɔn kɔɔ Yehowa fi hɔ. Apam+ nhoma a wohui wɔ Yehowa fi hɔ+ no, ɔkenkan emu nsɛm no nyinaa kyerɛɛ wɔn.+ 3 Ɔhene gyinaa edum no ho, na ɔyɛɛ apam* wɔ Yehowa anim+ sɛ obedi Yehowa akyi na ɔde ne koma nyinaa ne ne kra* nyinaa adi ne mmara nsɛm, ne nkaesɛm, ne n’ahyɛde so, na wadi apam no mu nsɛm a wɔakyerɛw wɔ nhoma yi mu no so. Na ɔman no nyinaa penee so sɛ wobedi apam no so.+ 4 Afei ɔhene ka kyerɛɛ ɔsɔfo panyin Hilkia+ ne asɔfo a wodi hɔ no ne apon ano ahwɛfo no sɛ anwenne a wɔyɛ maa Baal, ɔbosom dua*+ no, ne ɔsoro asafo nyinaa no, wonyiyi mfi Yehowa asɔredan no mu. Afei ɔkɔhyew ne nyinaa wɔ Kidron ho mfuw mu wɔ Yerusalem kurotia, na ɔde ɛho nsõ no kɔɔ Betel.+ 5 Na ananafo anyame no asɔfo a Yuda ahemfo de wɔn sisii hɔ sɛ wɔnhyew afɔrebɔde wɔ sorɔnsorɔmmea* hɔ wɔ Yuda nkurow mu ne mmeae a ɛbemmɛn Yerusalem no, ɔma wogyaee wɔn adwuma no; wɔn a na wɔhyew afɔrebɔde ma Baal, owia, ɔsram, sodiak nsorommakuw, ne ɔsoro asafo nyinaa+ nso, ɔma wogyaee wɔn adwuma no. 6 Oyii ɔbosom dua*+ no fii Yehowa fi hɔ de kɔɔ Kidron Bon no mu wɔ Yerusalem kurotia kɔhyewee+ wɔ Kidron Bon no mu, na ɔyam no muhumuhu, na ɔtow mfuturu no guu ɔmanfo amusiei.+ 7 Bio nso, tuutuufo mmarima a wɔwɔ asɔrefi hɔ no,+ obubuu wɔn adan a ɛwɔ Yehowa fi hɔ no, baabi a na mmea no nwene ntamadan ma ɔbosom dua* no. 8 Ɛnna oyiyii asɔfo no nyinaa fii Yuda nkurow mu, na sorɔnsorɔmmea a asɔfo no hyew afɔrebɔde wɔ hɔ, efi Geba+ kosi Beer-Seba+ no, oguu ho fĩ. Afei nso, sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ kurow sohwɛfo Yosua pon ano a sɛ obi rewura kurow no mu a ɛwɔ benkum so no, obubui. 9 Sorɔnsorɔmmea asɔfo no de, wɔammɛsom wɔ Yehowa afɔremuka anim wɔ Yerusalem,+ nanso wɔne wɔn nuanom dii paanoo a mmɔkaw* nnim no bi. 10 Tofet+ a ɛwɔ Hinom Mma Bon*+ mu no nso, oguu ho fĩ sɛnea ɛbɛyɛ a obiara renhyew ne babarima anaa ne babea wɔ ogya mu* mma Molek.+ 11 Afei nso, apɔnkɔ a Yuda ahemfo hyiraa so maa* owia no, wamma wɔamfa ahemfi panyin Natan-Melek adekoradan* a ɛwɔ abrannaa no so amma Yehowa fi hɔ bio, na ɔde ogya hyew nteaseɛnam a wɔahyira so ama owia+ no. 12 Afɔremuka a Yuda ahemfo yeyɛe a ɛwowɔ Ahas abansoro pia atifi+ ne afɔremuka a Manase sisii wɔ Yehowa fi adiwo abien no,+ ɔhene bubui, na ɔyamee wɔ hɔ, na ɔtow mfuturu no guu Kidron Bon no mu. 13 Sorɔnsorɔmmea a ɛwowɔ Yerusalem anim wɔ Ɔsɛe Bepɔw* no anaafo fam* a Israel hene Solomon sisi maa Sidonfo bosom fĩ Astoret ne Moabfo bosom fĩ Kemos ne Ammonfo bosom fĩ+ Milkom+ no, ɔhene guu ho fĩ. 14 Obubuu abosom adum no mu asinasin, otwitwaa abosonnua*+ no gui, na ɔde nnipa nnompe hyɛɛ hɔ ma. 15 Betel afɔremuka no ne sorɔnsorɔmmea a Nebat ba Yeroboam yɛe a ɛmaa Israel yɛɛ bɔne+ no, obubuu saa afɔremuka no ne sorɔnsorɔmmea no, ɔhyew sorɔnsorɔmmea no, na ɔyam no muhumuhu, ɛnna ɔhyew ɔbosom dua*+ no. 16 Bere a Yosia twaa n’ani a ohuu adamoa a ɛwowɔ bepɔw no so no, ɔsoma ma wɔkɔfaa adamoa no mu nnompe bɛhyewee wɔ afɔremuka no so de guu ho fĩ, na ɛno maa Yehowa asɛm a nokware Nyankopɔn nipa no ka too hɔ no baa mu.+ 17 Afei obisae sɛ: “Ɔda* bɛn na mihu wɔ ha yi?” Ɛnna kurow no mufo ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛyɛ nokware Nyankopɔn nipa a ofi Yuda+ bae a ɔkaa nea wode ayɛ Betel afɔremuka yi ho asɛm too hɔ no damoa.” 18 Ɛnna ɔkae sɛ: “Momma ɔnhome. Mma obiara mmfa ne nsa nnka ne nnompe.” Enti wɔamfa wɔn nsa anka ɔne odiyifo a ofi Samaria no nnompe.+ 19 Bio nso, sorɔnsorɔmmea adan a ɛwowɔ Samaria nkurow mu+ a Israel ahemfo sisi de hyɛɛ Onyankopɔn abufuw no, Yosia yiyii ne nyinaa, na ɔyɛɛ no sɛnea ɔyɛɛ Betel de no pɛpɛɛpɛ.+ 20 Enti asɔfo a na wɔwɔ sorɔnsorɔmmea hɔ no, okunkum wɔn nyinaa* wɔ afɔremuka no so, na ɔhyew nnipa nnompe wɔ so.+ Ɛno akyi no, ɔsan kɔɔ Yerusalem. 21 Afei ɔhene ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ: “Sɛnea wɔakyerɛw wɔ apam nhoma yi mu no,+ munni Twam+ mma Yehowa mo Nyankopɔn.” 22 Efi atemmufo a wobuu atɛn wɔ Israel no bere so ne Israel ne Yuda ahemfo nyinaa bere so no, na wonnii Twam bi a ɛte sɛ eyi da.+ 23 Nanso Ɔhene Yosia ahenni afe a ɛto so 18 mu no, wodii Twam yi maa Yehowa wɔ Yerusalem. 24 Afei nso, akɔmfo, asumanfo,+ terafim ahoni,*+ abosom fĩ,* ne atantanne a abepue Yuda asaase so ne Yerusalem no, Yosia tuu ase na ama wadi Mmara no mu nsɛm so,+ nea wɔakyerɛw wɔ nhoma a ɔsɔfo Hilkia kohui wɔ Yehowa fi hɔ mu+ no. 25 N’anim no, ɔhene biara amma sɛ ɔno a ɔde ne koma nyinaa ne ne kra* nyinaa+ ne n’ahoɔden nyinaa dan baa Yehowa nkyɛn sɛnea Mose mmara no te pɛpɛɛpɛ, na n’akyi nso, obiara ansɔre a ɔte sɛ ɔno. 26 Ne nyinaa akyi no, Yehowa antwe n’abufuw kɛse no ansan, efisɛ nneɛma bɔne a Manase yɛ de huruu ne bo no maa ne bo fuw Yuda denneennen.+ 27 Yehowa kae sɛ: “Yuda nso mɛtow no afi m’anim akyene+ sɛnea metow Israel kyenee no;+ Yerusalem kurow a mapaw yi, ne ofi a mekaa ho asɛm sɛ, ‘Me din bɛkɔ so atena hɔ’+ no, mɛtow akyene.” 28 Yosia ho nsɛm a aka ne nea ɔyɛe nyinaa, wɔakyerɛw wɔ Yuda ahemfo abakɔsɛm nhoma no mu. 29 Ne bere so na Egypt hene Farao Neko baa Asiria hene nkyɛn wɔ Asubɔnten Eufrate ho, na Ɔhene Yosia fii adi sɛ ɔne no de rekosi ani, nanso bere a Neko huu no no, okum no wɔ Megido.+ 30 Enti ne nkoa de n’amu too teaseɛnam mu fi Megido kɔɔ Yerusalem, na wosiee no wɔ ne damoa mu. Ɛnna asaase no sofo faa Yosia ba Yehoahas, na wɔsraa no sii no hene ma odii ne papa ade.+ 31 Yehoahas+ bedii hene no, na wadi mfe 23, na odii ade abosome abiɛsa wɔ Yerusalem. Ne maame din de Hamutal,+ na na ɔyɛ Yeremia a ofi Libna no babea. 32 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne sɛnea ne nananom yɛe no ara.+ 33 Farao Neko+ de no too afiase wɔ Ribla,+ Hamat asaase so, na wamma wanni hene bio wɔ Yerusalem, na ɔmaa asaase no sofo tuaa dwetɛ dwetikɛse* 100 ne sika kɔkɔɔ dwetikɛse baako.+ 34 Afei nso, Farao Neko de Yosia ba Eliakim sii hene ma odii ne papa Yosia ade, na ɔsesaa ne din frɛɛ no Yehoiakim. Yehoahas de, ɔde no kɔɔ Egypt,+ na ɛhɔ na okowui.+ 35 Yehoiakim de dwetɛ ne sika kɔkɔɔ no maa Farao. Ogyigyee tow fii ɔman no* nkyɛn ansa na ɔrenya de akotua dwetɛ a Farao twa maa no no. Otwaa dwetɛ ne sika kɔkɔɔ dodow a ɔmanfo no biara betua maa wɔn, na ɔde maa Farao Neko. 36 Yehoiakim+ bedii hene no, na wadi mfe 25, na odii ade mfe 11 wɔ Yerusalem.+ Ne maame din de Sebida, na na ɔyɛ Pedaia a ofi Ruma no ba. 37 Ɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne+ sɛnea ne nananom yɛe no ara.+
^ Anaa “ɔhyɛɛ apam no mu den.”
^ Nt., “remma ne babarima anaa ne babea mfa ogya mu.”
^ Nt., “ahemfo de maa.”
^ Kyerɛ sɛ, Ngodua Bepɔw, titiriw bepɔw no anaafo paa a wɔsan frɛ hɔ Mfomso Bepɔw no.
^ Nt., “nifa.” Kyerɛ sɛ, obi ani kyerɛ apuei fam a, ɛwɔ anaafo.
^ Anaa “Nkaebo.”
^ Anaa “ɔde wɔn nyinaa bɔɔ afɔre.”
^ Nt., “asaase no sofo.”